२७ चैत्र २०७४, मंगलवार १५:०९ April 10, 2018
LeaveaComment on एउटा सानो सुपारिको दानाले घरमा भित्रिन्छ धनवान, बनाउछ धनी आखिर कसरी ?
२७ चैत्र २०७४, मंगलवार १२:१२ April 10, 2018
LeaveaComment on बुनिया मन पर्छ ? घरमै यसरी बनाउनुहोस् मिठो बुनिया
सामग्री : चास्नी : ५ लिटर घिउ : ३ लिटर चनाको बेसन : २ केजी अलैंचीको दाना : ५० ग्राम बदाम : २ सय ग्राम पेस्ता : ५० ग्राम विधि : बेसनमा पानी मिसाएर बाक्लो घोल बनाई केही समय राख्ने । घिउलाई राम्रोसँग तताएर तयार राखिएको बेसनको बाक्लो घोललाई प्वाल परेको पन्यूबाट घिउमा खारी बुन्दी […]
२७ चैत्र २०७४, मंगलवार ०९:३१ April 10, 2018
LeaveaComment on ज्योतिषशास्त्र अनुसार स्त्रीले हरेक विहान यी काम गर्दा चम्किनेछ भाग्य
यदी कोही व्यक्तिको कुण्डलीमा ग्रह सम्बन्धी कोही दोष भएमा भाग्यले साथ नदिने विश्वास गरिन्छ। कुण्डलीको दोषाबाट टाढा रहनका लागि ज्योतिषले कयौँ उपाय बताउने गर्दछन्। ज्योतिषले बताएका उपाय अप्नाउँदा निकट भविष्यमा सकारात्मक फल मिलने सम्भावना बढ्ने विश्वास गरिन्छ। शास्त्रमा पत्नीलाई पतिको आधा अंग मानिन्छ। त्यसैले पत्नीलाई अर्धागिनी भन्ने गरिन्छ। पत्नीले पुजा पाठ गर्दा त्यसको पुण्य पतिलाई […]
नामको शुरुको अक्षरबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्धको बारेमा
२६ चैत्र २०७४, सोमबार १७:२० April 9, 2018
LeaveaComment on नामको शुरुको अक्षरबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्धको बारेमा
सबै १२ राशीका स्वभाव अलग अलग हुन्छन् र यी राशीका कारण व्यक्तिका स्वभाव र भविश्य निर्धारण गरिन्छ । राशिको स्वभावका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । आफ्नो नामको शुरुको अक्षरबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध कुन स्त्री या पुरुष सँग कस्तो रहन्छ । १.मेष राशि जुन मान्छेको राशी मेष […]
२६ चैत्र २०७४, सोमबार १७:१७ April 9, 2018
LeaveaComment on थाहा पाउनुहोस्, कस्ता कुराले चम्काउँछ तपाईको भाग्य
धर्ममा आस्था राख्नेका लागि ईश्वर सर्वशक्तिमान हुन् । ग्रह–नक्षत्र तथा देवी–देवता सबै ईश्वरको अधिनमा हुन्छन् । ईश्वर पछि प्रकृति महत्वपूर्ण हुन्छ । जसप्रकार प्रकृतिले रोग, शोक या अन्य घटना, दुर्घटना सिर्जना गरेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले त्यस्ता रोग, शोक या घटना दुर्घटनाबाट बच्ने उपाय पनि दिएको हुन्छ । प्रकृतिमै ती सबै उपाय छन्, जसबाट तपाईले […]
२६ चैत्र २०७४, सोमबार १५:५९ April 9, 2018
LeaveaComment on यसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ नेपाली खाना
विश्वव्यापीकरणसँगै अधिकांश नेपाली मौलिक खाना लोप हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउँदै विश्वभर प्रचारप्रसार गराउने उद्देश्यले नेपाली खानाको विश्वव्यापीकरण गर्ने राष्ट्रिय अभियान’ शुरु भएको छ । नेपालका स्थानीय रैथाने खानाको परिकारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी पर्यटक आकर्षण गर्ने उद्देश्यले अभियान शुरु गरिएको हो । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) को संयोजनमा रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएशन अफ […]
किन गर्नुहुँदैन अाफ्नै गाेत्रभित्रका व्यक्त्तिसँग विवाह ?
२६ चैत्र २०७४, सोमबार १३:४७ April 9, 2018
LeaveaComment on किन गर्नुहुँदैन अाफ्नै गाेत्रभित्रका व्यक्त्तिसँग विवाह ?
हिन्दू धर्मको सोह्र संस्कारमध्ये एक विवाह पनि हो । विवाहले वरवधू मात्र नभई दुई परिवारबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । हिन्दू धर्ममा एकै गोत्रमा विवाह गर्न नहुने मान्यता छ । आजकल यो परम्पराको पालन मानिसले गर्दैनन् तर धर्मग्रन्थहरूमा सहगोत्री विवाहलाई निषेध गरिएको छ । अनेक अनुसन्धानहरूले व्यक्तिलाई जेनेटिक रोग नलागोस् भनी सेपरेसन अफ जीन्स अर्थात् नजिकैको […]
२६ चैत्र २०७४, सोमबार १३:४६ April 9, 2018
LeaveaComment on यी हुन श्रीमानको अगाडि गर्न नहुने २० कुराहरु
श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन अनेक उपाय अपनाइन्छन् । विश्वका अधिकांश देशमा पुरुष मानसिकता नै हाबी देखिन्छ । दम्पत्ती बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउदा दुवैले धेरै विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि श्रीमतीले अझ बढी सम्झौता गर्नुपर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । पछिल्लो एक अनुसन्धानबाट सार्वजनिक भएको निष्कर्षमा उल्लेख भएका श्रीमानका अगाडि श्रीमतीले गर्नु नहुने २० […]
२६ चैत्र २०७४, सोमबार १३:४४ April 9, 2018
LeaveaComment on तपाई कस्तो प्रेम गरिरहनु भएको छ ? एकपल्ट अवश्य पढ्नुहोस्
प्रेम आफैंमा एक यस्तो चिज हो, जसमा भावना र अनुभव (फिलिङ) जोडिएको हुन्छ । प्रेममा परेका मानिसहरुलाई यस्तो लाग्छ मानौं उसको वरिपरि चारैतिर मात्र प्रेम छ । तर के तपाईलाई थाहा छ प्रेम कति प्रकारको हुन्छ ? या तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि मैले कस्तो प्रकारको प्रेम गरिरहेको छु ? पक्कै पनि हरेक मान्छेको […]
अभागी पुरुष यस्ता हुन्छन् ?
२६ चैत्र २०७४, सोमबार १३:४२ April 9, 2018
LeaveaComment on अभागी पुरुष यस्ता हुन्छन् ?
भाग्यमानी र अभागीको चर्चा जीवनमा सबैले गर्छन् । भाग्यमानी अर्थात सुख,समृद्धि र श्रेष्ठ जीवन । अभागी अर्थात दुःख र चिन्ताले भरिएको जीवन । कुनै पनि ब्यक्तिको भाग्यले साथ दिइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा उसको परिस्थिति हेरेर भन्न सकिन्छ ।शास्त्रमा यी तीन कुरा भएका ब्यक्तिलाई अभागी भनिएको छ । अरुको घरमा गुलाम कुनै पनि पुरुषको […]